महिलाहरु ओछ्यानमा के चाहान्छन..? - कान्तिखबर – सम्पुर्ण समाचार हामीसँग
१४ मंसिर २०७७, आईतवार , ०७:०३
महिलाहरु ओछ्यानमा के चाहान्छन..?
२०७७ बैशाख २९, सोमबार २२:५२ गते
काठमान्डै बैशाख – से’क्स वास्तवमा एक सुन्दर अनुभूति हो । चाहे यो पहिलो पटक होस् या नियमित यसले कुनै फरक पर्दैन । महिलाले हाम्रो सामाजिक चेतनाका कारण आफ्नो से’क्स इच्छा बारे खुलेर भन्न सक्दैनन् । के तपाईंलाई थाहा छ एक महिला से’क्सको दौरानमा के चाहन्छिन् । यहाँ तपाईंलाई हामी एक महिला से’क्सको दौरानमा के चाहन्छिन् तर भन्न सक्दिनन् भन्ने कुरा बताउनेछौं ।
प्रेम र रोमान्स- एक सुन्दर से’क्स से’सनपछि तपाईंको पार्टनरलाई प्रेमले भरिएको अं’कमाल आवश्यक पर्छ । से’क्सपछि जहिल्यै उनलाई प्रेमपूर्वक मु’सार्नुहोस् । उनीसँग गफ गर्नुहोस् उनीप्रति कृतज्ञ हुनुहोस् ।
स्पर्शको भाषा- हरेक महिला चाहन्छिन्की उसको पार्टनरले उनलाई निकै प्रेमले स्पर्श गरोस् । यो तरिका अपनाउँदा से’क्सको आनन्दको मात्रा पनि निकै धेरै हुने गर्छ । यदि तपाईं से’क्स पार्टनरको साथमा हुनुहुन्छ भने यो कुरा नभुल्नुहोस् ।
उनको तारिफ गर्न नभुल्नुहोस्- आफ्नै तारिफ सुन्न हरेक मानिस आतुर हुन्छ नै । से’क्सको दौरानमा उनलाई ‘आइ लभ यू’ या त ‘यू आर पर्फेक्ट’ जस्ता शब्दहरुले उनलाई खुसी बनाउने छ । अन्य तरिकाले पनि तपाईंले आफ्नो पार्टनरको तारिफ गर्न सक्नुहुनेछ । उनलाई महसुश गराउनुहोस् की उनी कति सुन्दरी र राम्री छिन् ।
से’क्सपेरिमेन्ट- से’क्सको दौरानमा फरक–फरकका एक्सपेरिमेन्ट पनि महिलाले मन पराउँछिन् । यो प्रयोगले से’क्सलाई निकै आनन्द बनाउनेछ ।डर्टी टक- से’क्सको दौरानमा डर्टी टक पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । जसलाई महिलाले स्वीकार पनि गर्छिन् । यसले महिलालाई से’क्सको भोक बढाउने काम गर्छ ।
उनी आफैलाई नेतृत्व गर्न दिनुहोस्- से’क्सको दौरानमा उनी आफैलाई नेतृत्व गर्न दिनुहोस् । उनले आफ्नो पुरुष साथीसँग प्रतिस्पर्धा चाहन्छीन् । उनको भावनाको निकै ख्याल गर्नुहोस् ।भूमिका- आफ्नो भूमिका बारे महिला निकै आकर्षित हुन्छन् । आफ्नो क्षमताद्वारा उनलाई उचित भूमिका दिनुहोस् ।
भूमिका- आफ्नो भूमिका बारे महिला निकै आकर्षित हुन्छन् । आफ्नो क्षमताद्वारा उनलाई उचित भूमिका दिनुहोस् ।
अन्तरराष्ट्रिय पत्रपत्रिकाः मनाेरञ्जन राेचक लाेकप्रिय
गायिका नेहा कक्कड र रोहनको बिहे आज
२०७७ कार्तिक ८, शनिबार १६:३४ गते कान्तिखबर
धनाड्यहरुको सूचिमा सलमानले पछारे शाहरुखलाई
२०७७ जेष्ठ ३, शनिबार १५:११ गते कान्तिखबर
यस कारण टुटेको थियो सञ्जय दत्त र माधुरी दीक्षित को सम्बन्ध
२०७७ जेष्ठ ३, शनिबार १५:०३ गते कान्तिखबर
बदलियो मौसम, शनिवारदेखि काठमाडौंमा चिसो बढ्ने
मौद्रिक समीक्षामा एटीएममा फेरि शुल्क लगाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक !
शैक्षिक वर्ष २०७७ देखि कक्षा ११ को नयाँ पाठ्क्रम लागू !!!
शिक्षकलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन त्रिविको आग्रह
११ मा भर्ना कहिले ?
अपराध सनसनी खबर हेडलाइन
२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार ०९:५९ गते कान्तिखबर
२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार ०९:५६ गते कान्तिखबर
२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार ०९:५१ गते कान्तिखबर
२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार ०९:४७ गते कान्तिखबर